अब काठमाडौंमा धुलोधुवाबाट जोगिन मास्क लगाउनु नपर्ने ! - Maxon Khabar
Home / News / अब काठमाडौंमा धुलोधुवाबाट जोगिन मास्क लगाउनु नपर्ने !
अब काठमाडौंमा धुलोधुवाबाट जोगिन मास्क लगाउनु नपर्ने !
मंसिर ८ , २०७५-काठमाडौं
संघिय नेपालको काठमाडौं महानगरपालिकाकाले नो मास्क सिटी अर्थात मुख छोप्नु नपर्ने अभियानको थालनी गरेको छ । स्थानिय निर्वाचन मा निर्बाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी अभियानका क्रममा काठमाडौँ महानगरलाई धुलो धुवाँमुक्त बनाउने बाचा गरेका थिए ।
मेयर शाक्यले चुनावी अभियानकै क्रममा खाल्डाखुल्डी पुर्ने र विशेष प्रविधिको प्रयोग गरि धुलो रहित काठमाडौँ निर्माण गर्ने योजना आफूसँग भएको बताएका थिए। तर चुनाव पस्चात जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै निकै आलोचना पनि खेपे
। मेयर शाक्यलेले अघि सारेका ती योजनाले अब भने मूर्तरुप लिने भएको छ । काठमाडौँ प्राचिन सभ्यता बोकेको महानगरपालिकालाई धुलो-धुँवामुक्त बनाउन यस अघि नै विभिन्न ठाउँमा गि्रनरी मेण्टेन गर्ने, कतिपय ठाउँमा ‘आइल्याड’ बनाएर त्यहाँ पानी हाल्ने काम गरिरहेको महानगरपालिकाले धुलो उठाउन सहज होस भनेर पाँच बु्रमर मेसिन खरीद प्रक्रियालाई समेत अघि बढाइएको बताइएको छ ।
महानगरपालिकाकाले मंसिर ८ शनिवार बाट सहरी सौन्दर्यता प्रवर्द्धनमा सघाउ कार्यक्रम शुरु गरेको छ । महानगरले गत कात्तिक २९ गते सहरी व्यवस्थापनमा काम गर्ने विकास साझेदारलाई बोलाएर महानगरको सौदर्य प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही अनुरुप आजबाट सडकको नालीमा बनाइएकाअनावश्यक र्‍याम्प हटाउने, नालीमा रहेको फोहोर माटो निकाल्ने र त्यस ठाउँमा जेट मेशिनको प्रयोग गरेर सफागर्ने कामको थालनी गरेको हो ।
शान्तिवाटिकाबाट शुरु गरेको यो अभियानले अब यो कार्यक्रम हरेक शनिबार नियमित सञ्चालन हुने मेयर शाक्यले बताए । मेयर शाक्यले उद्घाटन गरेपछी रत्नपार्कबाट शुरु भएको सडक सरसफाइ अभियान बागबजार, डिल्लीबजार, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, भीमसेनगोला भएर सिनामंगलसम्म गरिएको थियो ।